MySansar – Page 262 – A Nepali blog running since 2005. Seen by many as an antidote to mainstream media
कति अनौठो, के होला यो ?
Posted on June 11, 2012 June 12, 2012 by Salokya
राजनीतिको कुराले तपाईँलाई दिक्क लागिरहेको होला। अब केही समय यथास्थिति रहिरहनेछ। कुरा न अघि जानेछ, न पछाडि फर्कनेछ। अझै केही समय दलहरुबीच दोष एकअर्कालाई लगाउने क्रम चली नै रहनेछ। त्यही भएर आउनुस् अलि फरक खालका विषयमा ब्लग मोडौँ। नजिकैको फोटो हेर्नुस्, यो केको फोटो हो अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ ? ज्वालामुखी पहाड जस्तो देखिन्छ, कालो गहिरो… Continue reading
नेताहरुले माल पाएर नि चाल पाएनन् जस्तो छ है!
Posted on June 10, 2012 June 10, 2012 by Salokya
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र उपाध्यक्ष मोहन वैद्यको आजभोलि केही कुरा मिल्दैन जस्तो लाग्छ मिडियामा आएका समाचार हेर्दा। प्रचण्ड पक्षका नेताहरु एउटा कुरा गर्छन्, वैद्य पक्षका नेताहरु अर्को। विपरीत ध्रुवका जस्ता लाग्छन् दुई पक्षका कुराहरु। तर, प्रचण्ड र वैद्यको तपाईँ हामीले अहिलेसम्म थाहा नपाएको एउटा कुरा भने समान रहेछ। दुवै आइफोन चलाउँदा रहेछन्। आजको ‘नयाँ पत्रिका’ले… Continue reading
Posted on June 9, 2012 June 11, 2012 by Salokya
हिजो २२ दलले खुलामञ्चमा विरोध सभा गरेको होला भन्ठानेर लेखियो, अस्ति पत्रकार सम्मेलनमा २२ दलै भनेका थिए, तर आयोजकले २७ दल भनेपछि पत्याउनै पर्‍यो। हिजो २७ दलले गरेको ‘शक्ति प्रदर्शन’ लगत्तै आज राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको माग गर्दै कमल थापाको राप्रपा नेपालले ‘शक्ति प्रदर्शन’ गर्‍यो। एउटै स्थान (वीर अस्पतालनजिकैको आकाशे पुल)बाट कार्यक्रम सुरु भइसकेपछि खिचेका दुई फोटो… Continue reading
Posted on June 9, 2012 June 9, 2012 by mysansar
-शुषमा मानन्धर- “लेखिका महोदया, कतै म तिम्रो कथाको कुनै पात्र त बनेको छैन?” होटलमा बिहान ब्रेकफास्ट लिँदा सागरले हाँस्दै प्रश्न गरेको थियो। म एक लेखिका हुँ र लेख्नेहरुसँग यस्तो प्रश्न गरिनु कुनै अस्वाभाविक पनि हैन। “पहिला पढ्नू न।” मैले कुरालाई अँध्यारैमा टुङ्ग्याएकी थिएँ। उपन्यासको बाँकी रहेको अन्तिम भाग भर्खरै लेखिसकेकी छु। मनको निकै ठूलो भार… Continue reading
अब फँस्ने भए नारानघाटका व्यापारी
Posted on June 8, 2012 June 8, 2012 by Salokya
पहिले खबरै नगरी छापा मार्न आएको भन्दै राजस्व अनुसन्धान विभागको फ्लाइङ स्क्वाड (द्रुत टोली) लाई पसलमा थुनेर हातपात गर्न खोज्ने अनि गाडी जलाएर प्रहरीसँग भिडन्तमा उत्रको घटना तपाईँलाई यादै छ। गाडी मात्र हो र, आफ्नै सुरक्षाका लागि राखिएको प्रहरी बिटसमेत जलाइदिएका थिए उनीहरुले। उनीहरुले दबाब दिएर छापा मारिएको पसलमा लगाइएको सिल समेत खोल्न लगाएका थिए।… Continue reading
पुलिसले आज न्यायाधीश रणबहादुर बमलाई गोली हानी हत्या गर्नेमध्ये एकको स्केच सार्वजनिक गरेको छ। त्यतिबेला मास्क लगाएको भएर यति मात्र स्केच सार्वजनिक गरिएको रहेछ। घटनाको प्रत्यक्षदर्शीको बयानको आधारमा घटनामा संलग्न एक व्यक्तिको हुलिया यस्तो भनिएको छ- गोलो अनुहार, कालो वर्ण, पातलो दाह्री पालेको, अनुहारमा खटिराहरु भएको, आर्मी पुलिसको जस्तो छोटो कपाल काटेको, खाइलाग्दो जिउडाल भएको,… Continue reading
सूचना नदिई छापा मार्न आएको भन्दै ट्याक्स अफिसको गाडी जलाउने व्यापारी, छिसिक्क केही हुन पा’ छैन चक्काजाम गर्दै तोडफोडमा उत्रिहाल्ने विद्यार्थी अनि नेताको पछिपछि लाग्दै नारा जुलुस गर्ने हजारौँको भीडका फोटोमात्र मिडियामा देखेर नेपाल खत्तम भो, ह्याँ ठगी खानेहरु मात्र छन् भनेर सोच्नुभएको भए यो फोटो। ज्यानको माया त यिनलाई पनि लाग्दो हो नि। तर… Continue reading
माइसंसार पाठक प्रभाव : रोयटर्सले माफी त मागेन, तर गल्ती सच्यायो
Posted on June 6, 2012 June 7, 2012 by Salokya
नेपालको दोस्रो बढी बोलिने भाषा तिब्बती र दोस्रो ठूलो जाति बिहारी लगायतका हास्यास्पद, वाहियात तथ्य राख्ने रोयटर्सको अलर्टनेटलाई गल्ती सच्याउन लगाउन माइसंसारका पाठकहरु सफल भएका छन्। माइसंसारका पाठकहरुले यस्तो अभियान थालेको २४ घण्टा नबित्दै आज राति रोयटर्सले गल्ती सच्याएको हो। यहाँ हेर्नुस्। माइसंसारले रोयटर्सको गल्ती औँल्याउदै ब्लग लेखेपछि विश्वभरबाट पाठकहरुले रोयटर्सको साइटमा, उसको फेसबुक पेजमा… Continue reading
अराजक बन्दैछ समाज
Posted on June 6, 2012 June 6, 2012 by Salokya
समाज के विधि अराजक बनेको हो ! यो माथि जलिरहेको सरकारी गाडी हो। राजस्व अनुसन्धान केन्द्रको। ट्याक्स छलेको शंकामा आज बिहान नारायणगढको एउटा पसलमा केन्द्रले छापा मारेर सिल गरेको थियो। त्यसको विरोधमा वरपरका पसलेहरु समेत विरोधमा उत्रिए। भीड अराजक बन्यो। छापा मार्न आएको टोली पसलमै थुनियो। भीडले उनीहरु चढेर आएको जिपै जलाइदिए। चक्काजाम गर्न खोजे।… Continue reading
समय फरक, कथा उही- संविधान सभा भाग २
Posted on June 6, 2012 June 6, 2012 by mysansar
-नेपाल डायरी- प्रसङ्ग मधेश आन्दोलनबाटै सुरु गरौं। नम्बर एक – एक जना छिमेकी छन् बिद्युत प्राधिकरणका मिटर रिडर – उमेर ५० वर्ष। राजविराजको लंका टोलमा बस्थे , दुइटी छोरी, सानो र सुखी परिवार। सानो एउटा एक तल्ले घर। ओखढुङगाबाट मधेस झरेर जिन्दगीका ३५ साल काटेरे त्यहाँ। पिउनबाट जागिर सुरु गरेर अहिले मिटर रिडरसम्म बनेछन्। एक… Continue reading
आजको जस्तो दिन हामी बाचुन्जेल फेरि आउँदैन
आज एउटा विशेष दिन हो। खगोलीय हिसाबले आजको जस्तो दिन अब फेरि हामी बाचुन्जेल आउने छैन। आजको जस्तो दिन सन् २११७ मा मात्र फेरि आउनेछ। अर्थात् १ सय ५ वर्षपछि ! के छ त आजको दिनको विशेषता ? आज सूर्यलाई शुक्र ग्रहले अतिक्रमण गर्दैछ। अङ्ग्रेजीमा यसलाई Venus Transit भनिएको छ। यसलाई पारगमन वा भेदयुति पनि… Continue reading
बडिगार्डको बयानपछि उठेका प्रश्न
Posted on June 5, 2012 June 5, 2012 by Salokya
न्यायाधीश रणबहादुर बमको बिहीबार बिहान गोली हानी हत्या गरेको घटनामा अरु प्रत्यक्षदर्शीको बयान त पहिले नै मिडियामा आइसकेका थिए। तर घटनामा एउटै कारमा रहेका र पहिलो गोलीसमेत खाएका बडिगार्ड, जसलाई पीएसओ अर्थात् व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकृत भनिन्छ, को बयान आजको कान्तिपुरमा छापिएको छ। नेपाल प्रहरीका असई महेश गिरीको यो बयानपछि चालक अष्ट लामाप्रति शंकाका औँला उठाउने… Continue reading
न्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्या भएको पाँच दिन बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरीहरुले कसले र किन हत्या गर्‍यो भन्ने बारे केही नयाँ जानकारी पाउन सकेको छैन। चालक र अरु प्रत्यक्षदर्शीको हुलियाको आधारमा हत्याराको संभावित स्केच सार्वजनिक गर्ने काम पनि भएको छैन। घटनामा प्रयोग भएको मोटरसाइकल भेटिए पनि त्यो चोरीको भएको पत्ता लागेपछि त्यसले अनुसन्धानलाई केही… Continue reading
पेप्सीले मुर्गा बनाउन खोज्दैछ है तपाईँलाई
Posted on June 4, 2012 June 4, 2012 by Salokya
आजभोलि पेप्सीले एउटा नयाँ विज्ञापन बजारमा दिन थालेको छ। आकर्षक छ हेर्दा नारा- ड्रिङ्क एन्ड ड्राइभ! ‘मापसे’को फन्दामा परिरहनेहरुलाई ड्रिङ्क पनि गर्न पाउने, ड्राइभ पनि गर्न पाउने के रैछ यो भनेर एक पटक घोत्लन बाध्य बनाउन नारा सफल छ। समाजवाद, साम्यवाद जस्ता राजनीतिक वाद भन्दा नेपालमा ‘भाग्यवाद’ बलियो छ भनेर सबैलाई थाहा छ। त्यसैले त… Continue reading
एक हप्ता भइसक्दा पनि मिल्ने कुरै गर्दैनन् त
Posted on June 3, 2012 June 3, 2012 by Salokya
गएको हप्ता मध्यरातमा संविधान सभा विघटन भएको थियो। एक हप्ता बितिसक्दा पनि नेपालको राजनीति जहाँको त्यहीँ छ। जे जे कुरामा असहमति थियो, त्यो जस्ताको तस्तै छ। एक इञ्च अघि बढेको छैन कुरा। सरकारले चुनाव घोषणा गरेको छ। तर प्रमुख दुई दलको असहमति हुँदाहुँदै चुनाव हुनसक्दैन भन्नलाई कुनै ज्योतिषको भविष्यवाणी आवश्यक पर्दैन। त्यसमाथि चुनावका लागि संविधानका… Continue reading
फरक छुट्याउनुस् !
Posted on June 3, 2012 June 4, 2012 by mysansar
-श्याम श्रेष्ठ- कति राजनीतिक कुरा मात्र गर्ने, अब एउटा फरक छुट्याउने प्रतियोगिता पनि गरम न त माइसंसारमा। ल, धेरै कुरा नगरी नेपाली सेनाले माटोले माग्दैन, आँफै दिनु पर्छ भन्ने कार्यक्रमको लागि तयार पारेको माइन तथा आइइडी ब्यबस्थापनको भिडियो र अङ्ग्रेजी फिल्म द हर्ट लकरको यो भिडियोमा फरक छुट्याउनुस् त।
Posted on June 2, 2012 June 2, 2012 by mysansar
-राजेन्द्र श्रेष्ठ- मधुरो गतिमा आएको कारको गति भुईँमा बिछ्याइएको राजस्थानी मार्बललाई चक्काले घसार्दै घ्याच्च रोकियो। सिट बेल्ट नबाँधी आफैले हाँकेको कारबाट लरखराउँदै दिवाकर हातमा कोट झुण्ड्याउँदै झर्छ। मिल्ने भए ऊ त्यहीँ सुत्न चाहन्छ तर लक्ष्मीले आड दिएर भित्रसम्म पुर्‍याएपछि एकपटक बेसरी चिच्याउँछ- “जान”। त्यतिखेर लक्ष्मी बाहिरिसकेकी हुन्छे। बिदुला ओछ्यानमा बसेर ल्यापटपमा केही गर्दै हुन्छिन्। गाडी… Continue reading
सार्पसुटर भएको भए छ वटा गोली किन हान्थे?
Posted on June 2, 2012 June 2, 2012 by नवराज न्यौपाने
-नवराज न्यौपाने- सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रणबहादुर बमको बिहीबार दिनदहाडै गोली हानी हत्या भएपछि कसले र किन यसो गर्‍यो होला भन्ने अनुमान सबैले गरिरहेका छन्। बमको हत्या सुनियोजित देखिए पनि सार्पसुटरहरुको प्रयोग भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। भर्खर-भर्खर अपराधमा लागेका आत्मविश्वास कम भएका अपराधीहरु यस घटनामा प्रयोग भएको हुनुपर्छ। एउटै मानिसलाई छ/छ वटा गोली दागिनु, कति गोलीले… Continue reading
जेठ १९- एघार वर्षअघि आजैको रात दरबार हत्याकान्डमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको व‍ंशनाश भएको थियो। सुरुमा दरबारभित्र स्वचालित हतियार पडकिएर त्यो घटना भएको भनिए पनि पछि त्यस घटनाको छानबिन गर्न तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले एउटा समिति बनाएका थिए। समितिमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश र तत्कालीन सभामुख थिए। एमाले महासचिव माधव नेपाललाई नि राख्‍न खोज्या थे, तर उनी बस्न मानेनन्।… Continue reading